Pokémon GO ++ 1.21.2, vhezheni nyowani yeakakurumbira kubira, ikozvino yavapo | IPhone nhau
Iyo yazvino vhezheni yeakakurumbira kubira kweazvino Niantic kuburitswa, Pokémon GO ++ 1.21.2 yave kuwanikwa mune yayo vhezheni yeIOS kuitira kuti varairidzi vane yavo iPhone vagone kurodha pasi nekuisa iyo nyowani vhezheni Izvi zvinoreva kuti vashandisi vanosarudza iyi yakagadziridzwa vhezheni vanogona ikozvino kutora mukana wezvinhu zvitsva zvakauya neiyo v1.21.2 yepamutemo, vachiri kuenderera nekushandisa maficha akaita Pokémon Go ++ yakadaro inozivikanwa vhezheni. Panguva ino, iyi vhezheni itsva inongowanikwa chete kune iOS.
Kufanana neiyo yepamutemo vhezheni, iyi nyowani vhezheni yePokémon GO ++ haisanganisi akawanda maficha, asi isu hatigone kutaura kuti idiki dudziro nekuti inosanganisira yakakosha. tsigiro yeApple Watch. Kubva ikozvino zvichienda mberi, Pokémon varairidzi vanogona kufamba neiyo iPhone muhomwe yavo uye, kana paine chimwe chinhu chinonakidza chakatikomberedza, senge Pokémon, iyo Apple Watch inotizivisa uye isu tinogona kuita chinenge zvese kubva pachiuno chedu.
Pokémon GO ++ 1.21.2 inosanganisira rutsigiro rweApple Watch
Pakati pezvinhu zvatinogona kuita neApple Watch uye inozivikanwa mutambo weNiantic mukana we ponesa nguva yega yega yemutambo sekudzidzira, kureva kuti, pese patinobuda nekufamba tichitsvaga maPokémons, tinokwanisa kusevha nguva yatange tichifamba sekudzidzisa, chimwe chinhu chaisagoneka muvhezheni ye iPhone kana iPad.
Kana iwe uchida kushandisa Pokémon Go ++ 1.21.2, unogona tora yako yakagadziridzwa IPA kubva Iyi link. Kana iwe uine jailbroken iOS chishandiso, kuisa iyo IPA yeiyi yakagadziridzwa vhezheni yePokémon GO hakuzove kwakasiyana pane kuisa chero imwe IPA. Kuti umise isina jailbreak, uchafanirwa kuzviita uchishandisa dzimwe nzira, senge Saurik Cydia Impactor chishandiso chatinoshandisa kuisa semi-tethered jailbreak yeIOS 10 naLuca Todesco uye yapfuura naPangu, yaunayo chidzidzo mu Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon GO ++ 1.21.2, vhezheni nyowani yeakakurumbira kubira, iko zvino kwave kuwanikwa kweIOS
Kana ndichiedza kuiisa ndinowana Kanganiso ipa.cp: 271 uye hazvindibvumidze kuenderera.
Ini ndaive neyakambodhindwa vhezheni (yakadzimwa) uye panguva imwechete ini mapassword mapurogiramu akanzurwa.
Chero mazano ekugadzirisa?